စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပြင်အလွန်ကြည့်ပါ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 3, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာသင်၏လူများ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမရေမတွက်နိုင်သောအကြောင်းအရာများရှိသည်။ စီးပွားရေးလောကတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြောင်းလဲနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ရရှိသည်၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များတီထွင်သည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်ဖောက်သည်အသစ်များရရှိသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုစီသည်အကြောင်းအရာအသစ်များအတွက်ကောင်းမွန်သောကျွေးမွေးမှုတစ်ခုပေးသည်။
အမှန်မှာ၊ ကော်ပိုရိတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကြောင်းအရာများစွာမှထွက်ပြေးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာလူ၊ ထုတ်ကုန်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များမရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါက နိုင် ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်၎င်းသည်သင်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များမဟုတ်ကြောင်းကောင်းသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ရေကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးနိုင်ကြောင်းခရစ်ကယနေ့ကျွန်ုပ်အားချီးမွမ်းသည်။ အမြဲတမ်းတော့မလွယ်ကူပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီမှာငါဘယ်လိုလုပ်လဲ။
ငါအကြောင်းအရာမကုန်ဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ ၀ င်သည် ကျယ်ဝန်းသော ခေါင်းစဉ်များအုတ်ကျင်း။ ငါမှတ်ချက်ပေးလိမ့်မယ် ပုံစံအတည်ပြုခြင်း တစ်နေ့ ပျင်းကြောင်းစာအုပ် ငါ့ကိုလာမယ့်ဘယ်လို အကွာအဝေးကို PHP နှင့် MySQL တို့ဖြင့်တွက်ချက်ပါ နှင့်တစ်ဦး WordPress ကိုညှိ အခြားနေ့က။
ဤအရာအားလုံးသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာနယ်ပယ်အတွင်းတွင်ရှိသည်။ Form Validation ဆိုသည်မှာ software application တစ်ခုသို့မဟုတ် website တစ်ခု၏ရှေ့ဆုံးအပိုင်း (သို့) မြင်နိုင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံစံများကိုလွယ်ကူစွာ အသုံးပြု၍ မရပါကအသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံကိုဂရုမစိုက်ပါက၎င်းသည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောနေရာကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်၏စျေးကွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည် - အမြင်ကိုကျော်လွှားနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းထက်ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။
စကားလုံးတစ်လုံးတည်းသောစာအုပ်လား။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည်သင့်လျော်သောအချက်အလက်များကိုမပါဘဲကုမ္ပဏီမည်မျှတိုးတက်လာသည်ဟူသောစာအုပ်ဖြစ်သည်။ The ငန်းနက်။ အဲဒါဟာစျေးကွက်ရှာဖွေသူတွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြစ်သင့်သည်!
အကွာအဝေးတွက်ချက်မှု? သင့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေဘယ်ကနေလာကြတာလဲ အကယ်၍ သင်သည်လက်လီရောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအဘယ်မှလာသည်ကိုအတိအကျသိပြီးသင့် ၀ က်ဘ်လည်ပတ်သူများမည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
WordPress ကပြုပြင်တာလား။ ကောင်းပြီ, post သည်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးနှင့်အသစ်များကိုရှာဖွေများအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization နည်းလမ်းများအားဖြင့်သင်၏ website တွင်ဖောက်သည်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်။
ယခုခေတ်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်မေးပါက၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏ဇယားထက် ကျော်လွန်၍ ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အရောင်းဝန်ထမ်းမှသင်၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ထံသို့သင်၏ကုမ္ပဏီမှလူတိုင်းသည်သတင်းလွှာကိုဖန်တီးသောလူများထက်သင်၏စျေးကွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ Marketer အနေဖြင့်သင်စတင်သတိပြုမိလာပြီဖြစ်သည်။
ငါ့ကိုမယုံဘူးလား လုပ်ပါ "Huntington Bank Sucks" အတွက် Google Search။ အားနည်းသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်အထောက်အပံ့နှင့်မတတ်စွမ်းနိုင်သော ၀ န်ထမ်းများပေါင်းစပ်ထားခြင်းကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ ဘယ်လိုကြီးစွာသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်လား
ထိပ်တန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်များစာရင်းတွင်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ကြီးစွာသောအောက်ပါအချက်များပါဝင်သည်။ ငါစာရင်းကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးလစဉ်စစ်ဆေးသည်။ လစဉ်လတိုင်း, ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲလို့လစဉ်လတိုင်းငါမေးတယ်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုအပြည့်အစုံပြန်ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအဓိကမထားပါ။
ငါဘာကိုမှတင်းကျပ်သောနယ်နိမိတ်အချို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်နေစဉ် အ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ကိုသတ်မှတ်ပြီးပါပြီ၊ ငါစာရင်းမလုပ်ခဲ့လို့ဝမ်းသာပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Marketer တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသင်အာရုံစိုက်နေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်၏ဌာနမှထွက်လာသောမည်သည့်အလုပ်မဆို၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်များ၊ စာအုပ်များနှင့်ကွန်ဖရင့်များဖြစ်သည်… Luck! သင်အဲဒါကိုလိုအပ်လိမ့်မယ်
Tags: အမှတ်တံဆိပ်ထိတွေ့မှုစီးပွားရေးရလဒ်များစင်ကာပူဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးဂူဂဲလ်ပြောင်းလဲမှုများklout ရမှတ်စေတီပုထိုးများလူမှုရေးလမ်းညွှန်လူမှုရေးရှုခင်းလူမှုရေး loginလူမှုရေးခွဲဝေမှုအသွားအလာWordPress
ဇန်နဝါရီလ6ရက် 2008 ခုနှစ် ညနေ5နာရီ 24 မိနစ်
“…အကြောင်းအရာများစွာကို နှိပ်ခြင်း” နှင့်ပတ်သက်၍၊ Google ၏အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များသည် အပိုအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်… ၎င်းသည် သင့်ရှာဖွေမှုများကို “အခမဲ့အသုံးပြုရန်၊ စီးပွားဖြစ်၊ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံရန်” အကြောင်းအရာများကိုပင် ပစ်မှတ်ထားနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ . အဲ့ဒါနဲ့ .